Shiinaha SINHAI Dahaarka sheet polycarbonate dheemanka for warshad daaqadda albaabka iyo saarayaasha | SINHAI
SINHAI Xaashida xaashiyaha polycarbonate dheeman ee daaqada albaabka laga soo galo
Xaashida polycarbonate Embossed waa xaashi polycarbonate ah oo leh dusha dheeman u eg. Waa xaashi polycarbonate adag oo aan sinnayn. Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya isaga iyo guud ahaan xaashida adag ee PC waa muuqaalka iyo waxqabadka indhaha iftiinka maraya xaashida waa la kala firdhiyey loona gudbiyaa heerar kala duwan iyadoo loo marayo dusha qaab aan sinnayn, cufnaan aan sinnayn iyo xajmi ahaan, si loo gaaro muuqaal muuqda laakiin madmadow leh, U muuqda waxyeello cillad la'aan ah.
Xaashida polycarbonate ee la xardhay waxay ka samaysan tahay alaabada la soo dhoofiyo ee Bayer / sabic polycarbonate (PC), oo leh caabbinta saamaynta wanaagsan, Iska caabin wanaagsan oo foorarsi ah, iska caabin gabow ah iyo dahaadhka codka!
Xaashida polycarbonate ee la dhejiyay ayaa faafisa iftiinka ka muuqda, nalka ka dhigaa mid jilicsan, waxayna yaraysaa wasakhda iftiinka. Qaab qurux badan oo qurux badan, dusha xoqida u adkaysta, oo ku habboon naqshadaha kala duwan.
Midab Caddaan, Buluug, Haroo Buluug, Cagaar, Maarta, Opal ama La habeeyay
Muuqaalka Ningax dhawaaqa, Impact u adkaysta, debecsanaanta
1) Awood saameyn 850J / m. Qiyaastii 200-350 jeer oo dhalo caadi ah.
2) Miisaanka fudud: Qiyaastii 1/2 jeer oo galaas isku dhumuc ah.
3) Faafinta iftiinka: 80% -92% dhumucda kala duwan ee midabka cad.
4) Culeys gaar ah: 1.2 g / cm3
5) Isugeynta balaarinta kuleylka: 0.065 mm / m ° C
6) Heerkulka heerkulka: -40 ° Cto 120 ° C
7) Kuleylka kuleylka: 2.3-3.9 W / m2 º
8) Xoog siligga: > = 60N / mm2
9) Awood jilicsan: 100N / mm2
10) Heerkulka leexashada: 140 ° C
11) Modulus ee dabacsanaan: 2, 400mPa
12) Wadada silsiladaha ee biririfta: > = 65mPa
13) Dheereynta nasashada: > 100%
14) Kulayl gaar ah: 1.16J / kgk
15) Tusmada dhawaaqa aan dhawaaqa lahayn: 4mm-27dB, 10mm-33dB
Waxqabadka wanaagsan ee xaashida polycarbonate ee la soo duubay iyo hadhuudhka dusha sare, waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa dhismaha saqafka iftiinka, qaybta gudaha, shaashadda, baffle, albaabka jikada, albaabka iyo daaqadda, naqshada musqusha.